Muuse Suudi Vs C/hi Yuusuf
Labadaas “siyaasi” kee sumcad fiican, xagga siyaasaddase kee si fiican wax usoo xushay? Jawaabta laguma dhisayo darajo ay haystaan ama geyi ay ka taliyaan illeyn haddii reer Bari Muuse la weydiiyo, jawaabtu waa iska caddahay sidoo kalana haddii reer Xamar C/hi la weydiiyo, natiijadu waa muuqataa. Faallada waxaan ku dhisaynaa dhacdooyinka (fadqalalo) ka dhacaya Soomaaliya khaastan Koonfur. Maqaalka qaybtiisa dambe ayaan xogta isu ururinaynaa. Aan ku bilowno Muuse Suudi.
Muuse Suudi markuu Eldoret tegeyey kama duwanayn mid ka mid 23-kii “hogaamiye” ee wax saxiixay. Faraq u dhexeeyey ma jirin saxiixayaasha ka socda beelaha laga badanyahay iyo Muuse. Halka Kornaylka oo sheekadiisa aan dib ka arki doono uu u dhaqmay sidii madaxweyne oo geyi dhan hantidood iyo qolooyin heesaha ku fiican oo “ergo” sheeganayey horay usoo qaatay. Muuse Suudi waxaad mooddaa inuu is yiri sidaan ma dhowran karee waa inaan khamaaraa! Waxaad is leedahay wuxuu is yiri yaad canaanta kula dhacdaa. Sida xaqiiqda ah Soomaalida oo dhan waxaa isu keena waa Islaamka. Afarta iyo 0.5 wey ku abtirsadaan. Sidoo kale waxay leeyihiin cadow isku mid ah, waa Zenawi. Nin kasta oo Zenawi wejiga siiya, dadweynaha Soomaaliyeed waxay siinayaan dhegahooda. Waa taas waxa dadweynaha Soomaaliyeed wadnaha farta ugu hayeen iyagoo is-leh goormaa “seefta” Zenawi surka Suudi goyn? Cadowtinamadii Itoobiya waxay ku darsatay in ay calaacalaha lasoo gasho maareyntii shirka. Mid C/Casiis la yiraahdo oo Zenawi calooshi-u-shaqayste u ahaa ayaa yiri anaa shirka curad ka ah ee hala i ciseeyo.
Muuse iyo labadiisa saaxiib C/Qaasim iyo Caato waxay ciyaareen shax culus, waxay dhaheen haddaan cadowga Soomaaliyeed oo shirka carqaladaynaya aan ceyrsanno, waxaan boosas ka cabbiranaynaa wadnaha Soomaliweyn. Muuse Suudi wuxuu isku sii howlay sidii uu dadka u hilmaansiinlahaa hadalkii uu BBC-da Afsoomaaliga ka sheegay. Golaha Samata-bixinta ka hor iyo kadibba wuxuu isku howlay inay dhinacyadiisa fadhiyaan dad ka socda qaybaha kale ee Soomaaliya, wuuna ku guulaystay.
“Si aad qiimo u yeelatid waa inaad qiimo isu yeeshaa”. Muuse Suudi wuxuu caalamka tusay inuusan shisheeye dabo-ordin oo madaxbanaan yahay. Wuxuu bannaanka soo dhigay inuusan ogolayn in wax loo yeersho. Wuxuu si toos ah u eedeeyey “Sayidka Soomaaliyeed” waa Zenawi. Waa’ cusub ayaa ku beryey IGAD iyo bulshadii caalamka, sida Muuse uu ula soo baxay arrimo Soomaaliya laga ilaaway sida waddaniyad iyo cadow-eedayn. Caalamku waxay isku dayeen inay u cago-jugleeyaan laakiin wuxuu yiri “wadnahaygu jalowdiyo ma yaqaan jugleyntee”. IGAD qaarkeed iyo Midowga Yurub waxay dhaheen ninkaas faraha ka qaada oo arrimaha uu sheeganayo hala fiirsho haddaan nabad Soomaaliyeed rabno.
Isbarbardhigid Booqashooyinkii Muuse Suudi & C/laahi
Waxaa kale oo sumcadda Muuse Suudi iyo saaxiibbadiis sii kordhiyey hor-istaaggii ay diideen in la socodsiiyo dastuurkii ku-meel-gaarka ahaa ee Zenawi watay. Arrintaas waxay ku raaceen culumadii, aqoon-yahannadii, waxgaradkii iyo dadweynihii waddaniga ahaa oo dhan (rag iyo dumarba). Ka warran waddan dhan oo xeerkii lagu dhiqi lahaa Zenawi sameeyey? Muuse iyo saaxiibbadiis waxay sheegeen in sheeko xariirta la joojiyo oo dastuurka arrintiisa, Soomaalida faraha looga qaado. Arrintaas waxaa qaba Soomaali oo dhan marka laga reebo dhowr nin oo SRRC iyo G8 ka mid ah.
Tan kale oo tixgelin mudan waa Muuse oo u dhaqmay sidii nin weyn, waa nin madaxee. Isaga iyo saaxiibbadiis, waa siyaasiyiinta Koonfureed ee muujiyey inay dhul leeyihiin, “ no place like home”. Markastoo khilaaf dhaco waxay dhahaan: Xamar-cadde baan usoconnaa ee ninkii raba inuu la xisaabtamo halkaas ha iska soo xaadiriyo. Wuxuu kaloo leeyahay anigu ummad baan matalaa ma ahi nin dad albaab ku soo xirtay marka ergadayda halkaas ii saara.
Kornayl C/hi: waxaad mooddaa inuu qaaday waddo ka soo horjeeda tan Muuse Suudi. C/hi isagoo Puntland xukuma buu BBC-da u sheegay in degmo iyo tuulooyin ka mid dhulka uu xukumo oo qaarkiis jufadiisu degto ay argagixiso joogto (Galdogob iyo Bacaadweyn), isagoo u danleh inuu ceebeeyo dad muslimiin ah. Qaraxyadii Maraykanka ka dib waxaad mooddaa inuu is-tusay inuu waxa Soomaaliya isku xira ee Islaamnimada ah meel iska dhigo oo qaab kale wax ku raadsho si uu Soomaaliya u xukumo. Waxaa dadka ka yaabisay, markii dhulkii uu maalmo ka hor ka talin jiray uu ku sheegay inay argagixiso joogto sida Shimbiraale. Maraykankii waxay la yaabeen hadalkiisa, durbadiina wey ogaadeen inuusan siyaasi ahayn maxaa yeelay wuxuu eedayn karay oo kaliya Xamar, Raaskaambooni iyo meelaha kale oo uusan xukumin. Xittaa haddii aad khaldantid waxaad dhihi kartaa maaddaama aan meeshaas xukumin waxaa isoo gaaray hadalkaas beenta ah.
Wuxuu caddeeyey inuusan ahayn nin sharci u hogaansama markii uu dhamaystay seddexdii sano ee Puntland. Odayaashii Puntland waxay ka codsadeen inuu u soo qoor dhiibto si isaga iyo Jaamac loo dhexdhexaadiyo laakiin C/hi waa diiday. Iyadoo shirkii Kenya loo fadhiyo ayuu garanwaayey inuusan reer tolkiis leyn ee uu arrimaha u furdaamiyo sidii markii ugu dambaysay uu yeelay. Wuxuu ka bilaabay dagaalo aad u qaab-daran oo uu la gelay reer tolkiis sidii kuwii Qayaadsame, Dhuudo iyo meelo kale. Soomaalidii shirka joogtay waxay dhaheen “nin hooyadiis qorrax u jiiday aayadiis hoos ma hariyo”. Waxay garteen inuusan istaahilin in Soomaaliya loo dhiibo.
Kadib markuu diintii iyo dadkiisii colaad u muujiyey ayuu arrintii sii durkiyey markuu yiri haddaan madaxweyne noqdo waxaan kaashanayaa shisheeye (waxaa loo qaatay Itoobiya), mana ogoli meel ay wadaado xoog ku leeyihiin. Intaas kuma harine wuxuu yiri haddii ciidamo ajnabi ah oo Afrikaan u badan la keenayo anaa magaalo siin, Gaalkacyo. Dadkii taageersanaa qaar ka mid ah baa arkay in uusan ninku lahayn wax damiir ah. Waxay la yaabeen sida uu u rabo in gobolkiisii la geeyo askar ay dhici karto inay geeyeen cuduro ka af-badan shilkaha C/hi oo sidiisoo kale dadka torob-torob u dila. Cawaan badan oo raacsanayd ayaa candhuufta dib u liqday oo yiri: Ilaahoow naga qabo.
Maaddama C/hi hor-boodo dhul ka weyn kan Riyaale xukumo, ayaa waxay IGAD qaarkeed iyo Midowga Yurub la yaabeen sida loo la’yahay cid kale oo geyigaas u doodda. Waxay is-weydiiyeen miyaan dhulkaas Sheekh Nuur Cali Colow, C/Rashiid Cali Sharmaake, C/Risaaq Xaaji Xuseen, Maxamed Cawaale Liibaan, Cumar Samatar iyo boqortooyooyinkay sheegan jireen ka imaan? Waxay indhaha ku hayeen Jaamac Cali Jaamac oo inta odayaasha Puntland doorteen haddana hoostooda laga baxay. Markey waayeen qof soo labeeya ayey dhaheen ninku hadduu naga kaafiyey waxa Gaalkacyo loo gaaro ilaa xadka Riyaale aan kaligiis la xaalno. Ma garanaysaan cid kale oo Puntland ka socoto oo Eldoret wax ka saxiixday? Arrimahaas darteedba Puntland waa la iska hilmaamay oo waxaa xoogga la saaray dadka garanaya in wax ka maqanyihiin.
Laakiin maxaa C/hi ku kalifay inuu kaligi-guure noqdo? “Isaga iyo Allahiise” (arrintan ma aha shirki, Soomaalidu waxay u isticmaashaa iyagoo leh qofkaas isagaa naftiisa naga og laakiin Ilaahay baa ka sii og) wuxuu C/hi is-tusay inuusan u baahnayn qof Puntland ka yimid oo soo ag-fariista. Wuxuu ilooway maahmaahdii ahayd dad iyo duurba wax baa laga fishaa. Wuxuu mar aamminsanaa, SRRC oo udbaheeda iyo dhigaheeda wadata inay gacantiisa ku jirto. Xittaa Muuse wuu ku jiray dadkuu saas ka aamminsanaa. Markuu Muuse isa soo taagay wuxuu yiri “inta badan iyo baaqigaa harin”. Siyaasad-aqoon-la’aantiisa ayaa sababtay inuu wax iska aamminsanaado. Hadduu diiday cid Puntland ka socota inay boos la soo fariisato muxuu u diiday inay la taliyaan? Markuu yiri baddaan wax ku darayaa wuxuu ka caraysiiyey qolyihii uu is-lahaa gacantaad ku haysaa. Ilaa maalinkaas qaar badan oo iyagii ka mid ah ma aamminsana isaga iyo shaxdiisa.
Dorraad markuu Kenya ku soo noqday oo wax laga weydiiyey tirada Mombasa wuxuu yiri: wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya, Kenyuu wasiir u yahay! Oo C/hi ma hilmaamay in Wasiirku xukumo Kiplagat oo C/hi sii xukuma marka arrimaha Soomaaliya laga hadlayo?! Maxaan ugu qalqaalinayey in Maxamed Cabdi Xaashi uu Kenya yimaado sidoo kalana ergada Puntland ee Mbagathina ay C/hi iska cayriso? Maxaan u qoray maqaal ah: C/hi ma inuu madaxtooyo dhex-dhacdiidaa mise isbitaal? Waxaan odorosayey wuxuu soo wado.
Waxaa nasiib wanaag ah haddii C/hi uu rabo inuu barto waddadii ay Muuse Suudi, C/Qaasim iyo Caato mar hore soo mareen ee ahayd in la muuneeyo. Runtii ma filayo qof caqli leh oo geyiga Puntland u dhashay ama siyaasi ah oo dhinac istaagi doona C/hi iyagoo dalbanaya in loo kordhiyo. Dadka reer Puntland way ku faraxsanyihiin waxa C/hi ku dhacaya iyagoo leh “boowe aa la ahayd”. C/hi waakii aan kun dhabbo uga leexanjirine goormuu keenay inuu dhibsado ergada la kordhiyey, afartan ha ahaadeen ama boqole?! C/hi adaa sidaas gartaye is gee Mombasa ama dadka ka horbeyr. Ma filayo inuu jiro qof kuu raacayaa halkaas oo Puntland ka socda. Laakiin yaa isku hallayn kara Puntland? Miyaan qaarkood samayn bannaan-bax lagu taageerayo saxiixii khiyaanada ahaa ee Mbagathi ka dhacay 15/09/03? Waxaa dhici karta inaad maqashid qaar u mudaharaadaya in C/hi 9 xubnood la siiyo.
Maaddaama C/hi iyo taageerayaashu horay u caayeen muslimiintii Soomaaliyeed, oo ay albaabada u xireen ganacsi Soomaliyeed, ay u caayeen Jibouti, Carabaha, Midowga Yurub iyo dorraad oo uu eedeeyey wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya, waxa u harsan kaliya Bush iyo Blair iyo dabcan sayidkiisii Zenawi.
Waxaan xassuusinayaa dadka ku jira SRRC ee C/hi la fikrad ahoow inaad ka waantoowdaan arrintaas. Miyeydaan u jeedin in warbaahinta kornaylka sida Allpuntland qoreen in ninkii uu wargeys ka soo baxa Kenya wax ka qoray oo argagixisada lagu tilmaayey ay u dhowdahay inuu yahay Muuse Suudi?! Marka wax kasta oo xun ma kuwa Xamar baa leh? Maxamed Dheere iyo Cumar Filish ma liqi karaan arrintaas? Ma qaabkaas baa la isku eedeeyaa? Hadday liqaan xittaa dadka ay xukumaan baan yeelayn. Allpuntland markay tiri sifaha ninkaas lagu sheegay waxaa leh Muusi Suudi, waxay noqonaysaa Abgaalka taageera Muuse Suudina waa Al-Qaacido taageerayaal laakiin kuwa taageera Maxamed Dheere iyo Cumar Filish maxay Allpuntland ku sheegi?
Muuse Suudi iyo saaxibbadiis waxay iska dhigayaan inay Soomaali danaynayaan. Waxaa la sheegaa inay shirka ku casuumeen rag ruug caddaa ku ahaa siyaasadda Soomaaliya ee kal hore sida C/Risaaq Xaaji Xuseen. Iyo qorayaal caan ah sida Nuuradiin Faarax oo aan siyaasad iyo kooxo shuqul ku lahayn. Waxay Muuse iyo saaxiibbadiis isku dayeen inay isu keenaan odayaasha Waqooyi iyo kuwa Koonfureed halka C/hi uu madaxa isu geshay reer Waqooyi iyo reer Waqooyi Bari.
Iyadoo akhbaartaa laga duulayo waxaan shakki ku jirin in Muuse Suudi kor u socdo halka C/hi hoos u socdo haddiiba uu goboladdii deriska la ahaa sida “Somaliland” aysan isku fiicnayn, Carta iyo Muue Suudi warkood daa, qolayaha ay halka isku yihiin sida Dooxada Jubba iskuma fiicna, Carab iyo Cajamba afkuu saaray, xittaa dadkuu martida u ahaa ka baxsan waaye. Waxaad ku dartaa in xittaa ku-xigeenkiisii ay is-hayaan. Sida Horseednet qortay C/hi wuxuu jebiyey dastuurkaas dhoob-dhoobkaa ka dib markuu faraha la galay gobollada Soomaaliyeed oo uu gogtay.
Waxaan ka codsanaynaa Muuse iyo saaxiibbadiis inaan xaggooda naloo ka imaan. Dadweynuhu way arkeen khiyaamada lagu marsano SRRC marka waa in indhaha la furo.
IGAD iyo dadka daneeya arrimaha Soomaaliya ma u yeelayaan codsiga C/hi? Jawaabtu waa dhib yartahay oo waxay leeyihiin:
1. C/hi sheekada waxaa kaaga horreeyey Muuse Suudi oo sidii sheekadii dabangaalayaasha ee ku qornayd buugta Afsoomaaliga ee aniga iyo aniguna ahayd soconmayso. Waa waxa af Ingiriiska lagu dhaho “copycat”.
2. Hal sano iyo dheeraad adiga kaligaa Puntland mataleyey. Marka waxaa la raaligelinayaa dadka ishaysta, adigu madaxweynaad tahay maxaa is-haysi kuu keenay!
3. IGAD intaas oo jeer bay Soomaaliya martay iyagoo xaqiiqo-raadis ah mana jirto hal mar oo aad ka hadashay inaad u baahantahay dad reer Puntland ah oo kula maareeya arrinta.
4. C/hi xeerkii uu Jaamac Cali Jaamac uga hor-istaagay Puntland ayaa qabtay Xasan Abshir iyo Deeroow mana sheegan karaan TNG illeyn TNG waxaa xukuma ninkii xarrunteedii jooga. Marka shuruudaha C/Qaasim keensado, C/hi shuqul kuma leh.
5. Muuse Suudi waxay sharfeen C/Risaaq Xaaji Xuseen, Jaamac Cali Jaamac iyo siyaasiyiin kale oo ay C/hi isku halkooda afarta ka tirsanyihiin halka isagu sharfi waayey inuu Mombasa ku casuumo ku-xigeenkiisa iyo kan u jooga jagada guddoomiyaha baarlamaanka ee Puntland ama qof ka socda jabhadii Leelkase iyo Awrtable.
Markii la qabtay Saddam: 14/12/2003
Hadday jiraan madax aan C/hi ahayn oo xukunka Puntland ku soo raaxaysatay waa la arki doonaa iyagoo u doodaya arrintaas laakiin waxaan leeyahay sida Carabtu u tiraahdo “walli xaarrahaa man tawalaa qaarrahaa” oo ah udhiib wilaayada markay arrintu kululaato qof berisamaadkii aad u dhiibatay. Marka bal aan fiirino siyaasiyiinta reer Puntland oo C/hi horay usoo wanaajiyey oo u timaadda badbaadadiisa iyo inay IGAD kala hadlaan.
Qabqablihii is-kibriyoow bal arag waxa haysta Saddaam Xuseen. In sida bisaddii uu shabaq ku jiro. Waana abaalmarinta u dambaysa qofkii diintiisa iyo dadkiisu ka baxsanwaayo. Maxaa ku ogeysiiyey ciidamada Ilaahay? Ma aragtaan iyadoon Ilaahay malaa’ig iyo dad wanaagsan midna uusan howlgelin inuu mujrimiin kale howlgalin karo?
F.G. haddii qab-qable B ka siyaasad fiicanyahay qab-qable T yaan loo qaadan in qab-qable B uusan qab-qable ahayn oo shariif noqday.